Muxuu yahay muranka ka dhashay Amiiraddii Imaaraatka ee '' baxsatay''? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, United Arab Emirates Foreign Ministry
Mary Robinson, oo ahayd goddoomiyihii hore ee hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul Insaanka ayaa lagu eedeeyey inay taageero u muujisay Isutaga Imaaraadka Carabta, oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen maqnaashaha Amiirad u dhalatay Imaaraadka oo muddo dheer maqnayd.
Mrs Robinson, oo dhawaan la kullantay Amiirad Sheikha Latifa, oo ah gabadh uu dhalay boqorka maamula Dubai ayaa sheegtay in gabadhaasi ay tahay " haweenay da'a yar oo dhibaataysan''.
Mrs Robinson ayaa BBC-da u sheegtay in Amiiradda ay ka shalaysay muuqaal ay horay u duubtay, kaasi oo ay ku muujisay in lagu jirdilay.
Radha Stirling, oo ah madaxa urur u ololeeya dadka xabsiyada Dubai ku dhibaataysan ayaa sheegay in arrimaha ku saabsan Amiiradda ay tahay kuwa aanan laga ba hadlin ba oo ay adagtahay inaad hesho qof kaaga jawaaba.
Amiirad u dhalatay Imaaraadka Carabta oo la baadigoobayo
Sheekada maxay tahay?
Sheikha Latifa, oo ah gabadh uu dhalay boqorka ka taliya dalka Imaraatka Carabta ayaa lagu soo warramay inay isku dayday inay baxsato bishii Maarso ee sannadkan. Goob joogeyaal ayaa sheegay in la soo qabtay xilli ay saarneyd doon nooca raaxada ah oo mareysay meel u dhaw dalka Hindiya, si khasab ahna dib loogu soo celiyay.
Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dafiray wararkaas, waxayna sheegeen in ay qoyskeeda la nooshahay Amiiradda. Dhacdadaan ayaa walaac ku abuurtay qaar ka mid ah dalalka caalamka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha.
Xigashada Sawirka, Sheikha Latifa
Maalintii Isniinta ahayd ayuu wasiirka Arrimaha Dibadda ee Isutaga Imaaraadka Carabta sheegay inuu soo saaray warbixin uu la wadaagay Qaramada Midoobay. Bayaanka ayaa lagu qeexay falcelinta iyo ka jawaabidda wararka '' been abuurka ah" ee laga baahiyay Amiiradda.
Sawir laga soo qaaday Sheikha Latifa ayaa waxaa ku wehliyey Mary Robinson, oo ahayd goddoomiyihii hore ee Qaramada Midoobay u qaabilsaneyd xuquuqul Insaanka.
Maxay Mary Robinson ka tiri arrimahan?
Mrs Robinson, ayaa Raadiya BBC ee radio 4 u sheegtay inay casuumaad ka heshay Amiirad Haya, oo ah xaaska boqorka Imaraatka Carabta, "si ay qoyskeeda uga caawiso murugada haysato."
"Isku meel ayaan ku qadeenay Amiiradda. Waxay ahayd gabadh yar oo ay ka muuqatay murugo''.
Mrs Robinson ayaa sidoo kale sheegtay in Amiiradda ay wajahaysay dhibaatooyin caafimaad, balse haatan ay heysato adeegyo wanaagsan, inkastoo aysan fahfaahin dheeraad ah ka bixinin arrintan.
Muxuu yahay walaac taagan
Laba qof oo katirsan urur la sheegay inay caawiyeen gabadaha uu dhalay boqorka Imaraatka ayaa la weeraray, kadiba la afduubay, waxaana arrimahan aanan ka hadlin Robinson.
Mrs Robinson ayaa marar badan ku celceliysay hadalkii ay horay u soo saareen saraakisha Dubai ee ahaa in Latifa ay la nooshahay "Qoyskeeda aadka u jacel" arrinkan oo dhan na uu yahay "arrimo gaar u ah qoyska."
Urur kale oo u dooda arrimaha xuquuql insaanka oo lagu magacaabo Guernica 37, ayaa iyagu na walaac ka muujiyay hadalka ka soo yeeray Mrs Robinson.